Bishnu Rimal's Website » Blog Archive » ‘सरकारविरुद्ध मिडियामा ‘न्युज क्रिएट’ हुन थाल्यो’
पछिल्लो समय विभिन्न घटना तथा प्रसङ्गलाई लिएर सरकारको आलोचनाको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । निर्मला पन्त हत्या प्रकरण, विभिन्न आयोजनाहरूको कामकारवाही, वाइडबडी विमान प्रकरण र रेशम चौधरी शपथसम्मका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा पार्टीभित्रकै कतिपय नेताहरूले पनि आलोचना गर्ने गरेका छन् । सरकारको आलोचना किन भइरहेको छ ? यी विषयमा सरकारका धारणा के छन् र सरकार कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? सरकारले आफ्ना काम कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ? प्रस्तुत छ, यिनै र यस्तै–यस्तै विविध समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानी:
वाइडबडीमा त्यस्तो भएको छ कि छैन, समयले बताउला । किनभने सरकारले त सबै छानविन होस् भनेर अहिले न्यायिक आयोग नै बनाएको छ । संसदीय समितिले आफ्नो तरिकाले काम गर्छ, त्यसमा हामीले केही पनि बोल्न मिलेन । संसदीय समितिले बनाएको प्रतिवेदनको पनि सरकारले आफ्नो तरिकाले फेस गर्ला । सरकारले दोषी कसैलाई पनि छोड्दैन । प्रधानमन्त्रीले भन्नु पनि भएको छ आफू भष्ट्राचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न । वाइडबडीका सन्दर्भमा दुरासय छ कि भन्ने मलाई लाग्छ । सरकारले बनाएको छानविन आयोगले संसदलाई छानविन रोक त भन्दै भन्दैन । त्यसकारण यो फरक फरक विषय हो । विपक्षी दलका नेताले संसदमै यो प्रकरणमाथि छानविन गर्न माग गरेपछि छानविन आयोग बनाएको हो ।
हामीले चौमासिक मूल्याङ्कन गर्दै पुँजीगत खर्च बढी होस् भन्दै काम गरिरहेका छौँ । त्यस हिसाबले अहिले २५ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भइसकेको छ । अब अरू प्रक्रियामा पनि जान्छ । यो महिना भनेको ठेक्का लगाउने हो तर त्यसभन्दा पनि अघि बढिरहेका छौँ । बुझाउन मुस्किल परेको कहाँ भने अहिले हामी सिङ्गो समाज परिर्वतन भएर नयाँ सिर्जना गर्ने चरणमा छौँ । सत्ता परिवर्तन भएर अर्काले बनिबनाउ कुर्सीमा आएर यो सरकार बसेको स्थिति हैन । पाँच ठाउँमा त हामी संरचनागत पुनर्संरचना नै गर्दैछौँ । कानुनको पुनर्संरचना गर्दैछौँ ।
अहिले हामीले अर्को सिस्टम फेरेका छौँ । पहिले त कम्युनिस्ट पार्टीले पनि नन् कम्युनिस्ट पार्टीले पनि जुनसुकै आर्थिक व्यवस्थामा अगाडि जान सक्ने व्यवस्था थियो । लिबरल इकोनोमीअन्तर्गत हामी चलिरहेका थियौँ । अहिले त संविधानले हामीलाई सीमा बाँधिदिएको छ । तीनखम्बे अर्थनीति ( प्राइभेट, सहकारी र सरकारी) पालना गर्न त्यसपछि तिमीले गर्ने कार्य समाजवाद उन्मुख हुनुपर्छ भनिएको छ । सरकारले तयार गरेका यी संरचनाबारे मानिसले बुझिरहेका छैनन् ।एकथरी साथीहरू समाचारबाट प्रभावित हुनुहुन्छ, एकथरी साथीहरू समाचार बनाउन लाग्नुभएको छ । अघि मैले भने नी फेब्रिकेट गरेर एउटा न्यूज बनायो, त्यसलाई सङ्क्रामक बनायो । त्यसकै पछि अरूलाई धारणा बनाउन लगायो । तपाईं गाउँमा जानुभयो भने यो पाउनुहुन्न फेरि । सचेत जनसमुदाय जो सोसियल मिडियामा अल्झेर बसेका छन्, उनीहरू बढी आलोचक छन् ।
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ, त्यहाँ कति रूख काट्नुपर्छ । त्यसको हिसाब हुँदैथियो । हाम्रो पर्यटनमन्त्रीलाई बसिखाउँ न उठिखाउँ बनाए । त्यसकारण पनि यो वाइडबडीमा पनि नियत साफ छैन कि भनेर शङ्का गर्न सकिन्छ । पार्टी र सरकार चल्ने भनेको सल्लाहले चल्ने हो । त्यही व्यक्ति कहिले पार्टी बन्ला कहिले सरकार बन्ला, त्यो त हुने नै त्यही हो नि । सरकारले पार्टी चलाउने भनेको के हो ? प्रधानमन्त्री नै पार्टी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले नै पार्टीको अध्यक्षता गर्नुहुन्छ । लौ सरकारले पार्टी चलायो भनेर भन्न मिल्दैन ।
शम्भु दंगाल । पुस २३, २०७५ । रातोपाटी